सिपाहीले विदा माग्न निवेदनमा लेखे यस्तो कारण, हाँसेरै पागल भए अफिसर , Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
सिपाहीले विदा माग्न निवेदनमा लेखे यस्तो कारण, हाँसेरै पागल भए अफिसर
एजेन्सी। सरकारी वा गैरसरकारी काम गर्नेहरुले कामबाट विदा माग्नु पर्यो भने निवेदन दिने गर्छन् । निवेदनमा उनीहरुले विदा लिनुपर्ने कारण पनि खुलाउँछन् । तर, एक प्रहरी जवानले यसरी विदा माग्न लेखेको निवेदनमा यस्तो कारण लेखिदिए कि यसको चर्चा सामाजिक संजालमा छाएको छ ।
भारतको उत्तर प्रदेशमा कार्यरत प्रहरी जवानले यस्तो विचित्र आवेदन लेखेका हुन् । मनोज नामका ती सिपाहीले निवेदनमा लेखे कि उनको भर्खरै बिहे भएको छ । उनकी पत्नीले उनलाई धेरै सम्झिन्छिन् । त्यसकारण उनले विदा लिनैपर्ने भएको छ ।
ती सिपाहीको निवेदन भने स्वीकार गरिएको छ र उनले विदा पाएका छन् । तर, उनको निवेदन भने सामाजिक संजालमा अत्यन्तै भाइरल भइरहेको छ । मनोजले आफ्ना अफिसरसँग ८ दिनको विदा मागेका थिए । उनी आगरा जिल्लामा तैनाथ भएको बताइएको छ ।